Amanyathelo okuhamba kwabafundi nokuba ngaba abafundi bathathelwa ingqalelo &quot;njengabaya kwimodeli&quot;. &quot;Umzekelo ofikayo&quot; ngumfundi obakho ubuncinane ngama-96% eentsuku zakhe zobhaliso kunyaka wesikolo (umfundi ozingisayo); okanye umfundi ophucule ukuhamba kwakhe ukuya amanqaku ubuncinane ngamanqaku amathathu eepesenti ukusuka kunyaka wesikolo wokugqibela (ngokuphucula abaphumeleleyo). Ukuhamba isikolo kwabafundi kuthathela ingqalelo ipesenti yabafundi abangahambiyo esikolweni, okanye abaphulukene ne-10% yeentsuku zobhaliso kunyaka wesikolo. Ngabafundi kuphela abachitha uninzi lonyaka wesikolo ababhalise esikolweni ababandakanyiweyo xa kunikwa ingxelo yokuhamba isikolo kwabafundi. (Umthombo wedatha: unyaka wesikolo ka-2018-2019)
Zeziphi iipateni zokuhamba kwabafundi kwesi sikolo?
Amanyathelo okuhamba kwabafundi nokuba ngaba abafundi bathathelwa ingqalelo “njengabaya kwimodeli” ngokubonakalisa ukuqhubeka nokuhamba isikolo okanye ukuphucula ukuhamba isikolo kunyaka wesikolo. Ukungabikho emsebenzini ngokungapheliyo liqondo labafundi abangabikhoyo esikolweni okungenani nge-10 pesenti, ngenxa yaso nasiphi na isizathu.
I-avareji kaRhulumente 65.3%
I-avareji kaRhulumente 61.9%
I-avareji kaRhulumente 18.3%
Ukungabikho rhoqo emsebenzini
I-avareji kaRhulumente 13.7%
Benza njani abafundi kwesi sikolo ngokuthelekiswa neethagethi zikarhulumente zangokuya kwimodeli?
Ithagethi yethutyana ibonisa ukuba inkqubela phambili elindelekileyo ifezekisiwe ukufezekisa iinjongo zexesha elide zikarhulumente zokuhambela imodeli.